ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများမော်ကွန်း - ထို rayhab
ဥရောပမှာတော့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦန်ကြီးအမ် Cahit Turhan "ကျွန်တော်တို့အခုသင်္ဘောန်ဆောင်မှုအတွက်ပထမဦးဆုံးအဆင့်။ ဤအခြေအနေသည်ချော့မော့, ဝမ်းမြောက်စေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုငျသောရေကြောင်းလုပ်ငန်းသဘာဝအကျိုးဆက်အဖြစ်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်နှင့် [ပို ... ]
Turkishtime နှင့် Halkbank "အဖြစ်များသည့်စိတ်အစည်းအဝေး" Denizli ဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုံတွင်ကျင်းပခဲ့ဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုန်ထဲကဆောင်သွားကြ၏။ Denizli OSB အလားအလာ, ပြဿနာတွေနဲ့ယူခံရဖို့အစီအမံဆွေးနွေးကြ၏။ Denizli OSB ပူးတွဲထောက်လှမ်းရေးအစည်းအဝေး; Halkbank အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများစျေးကွက်2။ အခန်း [ပို ... ]
တူရကီရဲ့ Polat CHP အရေးပေါ်ရှေးဦးစွာတုန့်ပြန်များအတွက် expropriation ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်သောပါလီမန်မေးခွန်းများKemalpaşaတပ်ဆင်ပါလိမ့်မည်ပို့ဆောင်ရေးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကျေးရွာအမ် Cahit Turhan ထံမှလာ၏။ ပါလီမန်ဟာပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်ကော်မရှင်နာတို့နှင့်ပိတ်ပင် CHP İzmirလက်ထောက် Mahir Polat Izmir ၏အဖွဲ့ဝင် [ပို ... ]
သိသာထင်ရှားသောဆက်ပြောသည်တင်ပို့မှုမှတန်ဖိုးတစ်ခုနှင့်ဒေသတွင်းပေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌ Kahramanmaras Turkoglu အတွက်ကြီးမားတဲ့အရေးပါမှုဟာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center ကလှုပ်ရှားမှုများစတင်ခဲ့တယ်။ Kahramanmaras စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း (KMTSO) ကိုထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများအတွက်ဦးစားပေးကဏ္ဍများတ 1,9 [ပို ... ]
"ပေါင်းစည်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာတွင်အနောက်တိုင်းမြေထဲအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ" ၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူSüleyman Demirel တက္ကသိုလ်ကစီစဉ်Keçiborluမြူနီစီပယ်Keçiborluမြူနီစီပယ်အဆိုပါရုပ်ရှင်ရုံနှင့်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ၌ကျင်းပခဲ့သည်။ Keçiborluအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမြို့တော်ဝန်က Yusuf Murat တောက်ပ၏ပထမဦးဆုံး session တစ်ခု, SDA ဒုအဓိပတိ [ပို ... ]
300 သန်း TL ကုန်ပစ္စည်းများစွန့်ပစ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center ကငါ့ကိုအတူသူများဖြစ်ကြလိမ့်မည် Tekkekoy
တူရကီ Samsun (50 သန်းပေါင်ခန့်) built 300 ယူရိုသန်းစိုက်ပျိုးရေးအင်ဂျင်နီယာများကုန်သည်ကြီးများအသင်းsonuçlandı.mahkပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ, ဆောက်လုပ်ရေး 1 အားဖြင့်တင်သွင်းသည့်တရားစွဲဆိုမှုနောက်တော်သို့လိုက်၏လွှတ်ပေးရေးကိုပယ်ဖျက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်တင်သွင်းသည့်တရားစွဲဆိုမှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ် '' ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကျေးရွာ '' စီမံကိန်းကိုတောင်သူလယ်သမားများ၏ရန်။ လူတန်းစားလယ်ယာမြေပြု [ပို ... ]
Young ကကောလိပ်ကျောင်း Samsun ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရေးစင်တာ
ကိုးမေလတွင်တက္ကသိုလ်စည်းမျဉ်းများနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်အသက်မွေးမှု High School တွင်အစီအစဉ်ကျောင်းသားများ, အဖွဲ့အစည်းကဆောင်ရွက်လှုပ်ရှားမှုများကိုအတွင်း Samsun TSO Samsun ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာလေ့လာမှုခရီးစဉ်တွေ့ Samsun အီးယူသတင်းအချက်အလက်စင်တာကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာတူရကီမှဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်ညှိနှိုင်းကာအကောင်အထည်ဖော်နေသည် [ပို ... ]
ဝန်ကြီး Turhan, Konya YHT ဘူတာနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center က Visited
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာနှင့်အဆောက်အဦးမှာတွေ့ရှိ Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထား (YHT) ဘူတာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ။ ဝန်ကြီး Turhan, ပထမဦးဆုံးအဘယ်မှာအချို့လည်ပတ်မှုနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမြို့, Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထားဘူတာဆီသို့ရောက် လာ. , [ပို ... ]
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး4၏ပျောက်ဆုံးနေထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center ကစီးပွားရေးတင်ဒါရလဒ်များ၏တူရကီပြည်နယ်မီးရထားPalandökenပြီးစီး၏4ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု (TCDD) 2018 / 597670 11.120.341,57 £ JCC အရေအတွက်ကို4အကြောင်းကိုတူရကီပြည်နယ်မီးရထားPalandökenထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရေးစင်တာများ၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုကုန်ကျ [ပို ... ]
TSO OSB နှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးညီလာခံကနေ Soma
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Soma ကုန်သည်ကြီးများအသင်း Soma Soma Fatih အသက်မွေးမှုနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ Anatolian High School တွင်ဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုန်နှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးမြှင့်တင်ရေးကွန်ဖရအလုပ်ရှုပ်နေသည့်ပါဝင်မှုနှင့်အတူကျင်းပခဲ့သည်။ ၏ပံ့ပိုးမှုများကိုကစီစဉ် အဆိုပါညီလာခံခန်းမ၌ကျင်းပ Soma စီးတီးကောင်စီညီလာခံ, Soma အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Ahmet [ပို ... ]
အဲဒီမှာ Hawk ရဟတ်ယာဉ်ရဲ့မြေအောက်စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်များ
သူတို့ကမတ်လဒေသခံရွေးကောက်ပွဲတွင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပါဘူးမယ်ဆိုရင် Gaziantep တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Fatma Sahin, 31 သို့ပြောသည်။ အဆိုပါစွန်ငှက်ဖော်ပြရွေးကောက်ပွဲကြေငြာစာတမ်းတွင် "စိမ်းဝါနုရောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘိုးအဘွားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အာဇာနည်စစ်ပြန်များ၏မှတ်ဉာဏ် befitting တစ်မြို့အောင်ဆက်လက်ချင်တယ်။ ဒါဟာ Gaziantep တစ်မြို့ဖြစ်၏ [ပို ... ]
Tekirdag Lightning အခြေစိုက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
Tekirdag အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Aziz က Yildirim သမ္မတ, ပြည်နယ်၏Süleymanpaşaခရိုင်; လက်ရှိဆိပ်ကမ်းများ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အဦများ, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်နှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအာကာသနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်မော်ဒယ်၏ပြဌာန်းခွင့်ကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုတဲ့နေရာပိုပြီးထိရောက်နှင့်ထိရောက်သောအသုံးပြုမှုကိုအာရုံစိုက် [ပို ... ]
Apaydin, Konya-Karaman ငျ့မြန်နှုန်းမီးရထားလိုင်း Visited
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ İsa Apaydın အင်္ဂါနေ့ဇန်နဝါရီ 29 2019, Konya-Karaman မြန်နှုန်းမီးရထားစီမံကိန်းများ၏အတိုင်းအတာ; Eregli နှင့် Cumra က်ဘ်ဆိုက်များ, Karaman ဘူတာနှင့်Kayacıkထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center ကဘူတာထဲမှာ YHT လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူ Konya အတွက်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်။ [ပို ... ]
Apaydin, Konya YHT ဘူတာနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center က Visited
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ İsa Apaydın, YHT ဘူတာနှင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအလုပ်Kayacıkထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center က Konya built-in, bulunarak စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု, သက်ဆိုင်ရာ၏လုပျငနျးနဲ့ပတျသကျတဲ့သတငျးအခကျြကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Konya လူမှုရေးဂျုံစျေးကွက်၏ခရိုင်အတွင်းရှိအမျိုးမျိုးခရီးသည်များအတွက် Konya YHT ဘူတာ [ပို ... ]
အဆိုပါ KTO ကသမ္မတတူရကီ၏မေတ္တာရပ်ခံချက်Gülsoyစီးပွားရေးကိုစည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုပြောပြသည်
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး Kayseri ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (CTO) ဥက္ကဋ္ဌ Omer Gülsoyဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်အထံတော်နှင့်အတူတူရကီစီးပွားရေးကိုစည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုပါဝင်ခဲ့။ အဆိုပါ TOBB အမွှာမျှော်စင်မှာကျင်းပအိမ်မှာကုန်သည်များနှင့်ကုန်စည်ဒိုင်များတူရကီသမဂ္ဂ (TOBB) နိုငျငံတျောသမ်မတော်လ်ရီဖက်Hisarcıklıoğlu, [ပို ... ]
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး4၏ပျောက်ဆုံးနေထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center ကစီးပွားရေးတင်ဒါရလဒ်များ၏တူရကီပြည်နယ်မီးရထားPalandökenပြီးစီး၏4ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု။ ယ်ယူခြင်းနှင့် Inventory Control ကိုခရိုင်ရဲ့ Service ကိုညွှန်ကြားမှု (TCDD) 2018 / 597670 8.339.955,00 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို TL နှင့် ပတ်သက်. [ပို ... ]
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Ayhan: "Sivas အတွက်အလားအလာလပ်ြရြားမြကျနော်တို့ Want ပြောင်းရွှေ့"
ဆောင်ပုဒ်က Moderator အစည်းအဝေး Sivas Cumhuriyet တက္ကသိုလ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့သည်နှင့်အတူဒီဇင်ဘာလ 26 2018 အပေါ်ကျင်းပလိမ့်မည်သည့်ပါဝင်သူများ၏အဖွဲ့အစည်းများ၏ခေါင်းဆောင်မှု '' ဘုံသည်ပညာကိုမနက်ဖြန် '' နှင့်အတူ Sivas အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး။ ဒီအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအဲဒီပညာရှင်အစည်းအဝေး, Saleh Sivas အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Ayhan, "၏အဖွင့်အမှာစကားပြောကြား [ပို ... ]
ဝန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်တို့တွင်စုစုပေါင်း 1 464 ဘီလီယံခန့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ဘယ်မှာဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမြှို့နယ်များတွင်ပြည်သူ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသန်းပေါင်ဟာ Konya တဲ့ Metropolitan ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ "Hz ။ သူက Mevlana သွားကြဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုက်ညီခြင်းမရှိပါပြောပါတယ်ဆိုလျှင်, "သမ္မတအာဒိုဂန် Konya ညျြးကပြောသည် [ပို ... ]
ဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုန်အထက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ် (OSBÜK) ပင်လယ်နက်ဒေသကြီးတိုင်ပင် 56 OSB အစည်းအဝေးပြင်းထန်သောပါဝင်မှုနှင့်အတူဒေသတွင်း၌ Samsun ကျင်းပခဲ့သည်ကစီစဉ်။ အစည်းအဝေး, အကြံပေးချက်များနှင့်မျှော်လင့်ချက်များမှာဒေသတွင်း၌ OSB များ၏ပြဿနာများကိုတစ်ဦးချင်းစီစက်မှုလက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဆွေးနွေးတဲ့အခါ [ပို ... ]
Samsun, နည်းပညာကို 'တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်စိတ်ထဲ Sahin နှင့်အတူကြီးထွားလာသည်, ထိုစက်မှုလက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Mustafa အတွက်အာဏာပိုင်များ Varank တည်ခင်းဧည်, Samsun သို့ပြောသည်။ စိတ်ကို Sahin ဥက္ကဋ္ဌဝန်ကြီးစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Mustafa Varank အလည်အပတ်ခရီး Samsun နှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Mustafa ağırladı.çeşitl၏နယ်ပယ်အတွင်း၌လာ [ပို ... ]
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး Izmir ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (Iztok), Kemalpasa ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကျေးရွာစီမံကိန်း၌တည်လိမ့်ရန်စီစဉ်ထား "Logistic ဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုံ" ထူထောင်မှုနှင့်အဆင့်အတန်းများအတွက်စက်မှုလက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Mustafa Varank နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ခဲ့သည်။ Iztok ဥက္ကဋ္ဌမာမွတ်Özgener, ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာပြဿနာ [ပို ... ]
စိတ်ကို Sahin ၏မြို့တော်ဝန်တက်ရောက်ခဲ့သည် Samsun ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကျေးရွာဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင် "ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကျေးရွာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမော်ဒယ်တစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကျောက်ကိုအောက်မှာငါတို့လက်ထားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ "ဟု၎င်းကပြောသည်။ Samsun ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကျေးရွာဘုတ်အဖွဲ့ Village're toplandısam [ပို ... ]
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး Izmir ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (Iztok), အလွန်အရေးကြီးသောစီးပွားရေးနှင့်နိုဝင်ဘာလအတွက်သာမန်ညီလာခံတွင်လက်ရှိပြဿနာများကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ဤအရာတစ်ခုမှာ Kemalpasa ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကျေးရွာ၌တည်လိမ့်မှစီမံကိန်းများ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်နှင့် ပတ်သက်. တူရကီနှင့်အဆက်အသွယ်အစပျိုးသောသတင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Kahramanmaras စက်မှုတော်လှန်ရေးအတွက် Turkoglu ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center ကစစ်ဆင်ရေး Make မှပါလျှင်
ကမျြးစာလာစေမည်အကြောင်း, စစ်ဆင်ရေးသို့အသစ်သောအောင်မြင်မှုပုံပြင်များသိမ်းယူနိုင်လျှင်, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center က Turkoglu ၏အဖွင့်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သောရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်အတွက်လျော့နည်းခြင်းမရှိနှင့်လိမ့်မည် Kahramanmaras စက်မှုတော်လှန်ရေးရောက်ရှိဖို့။2နှစ်ပေါင်း [ပို ... ]
Tekkeköyတူရကီရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Center ကရောက်ရှိခဲ့သည်ဖြစ်လာ
Togari ၏သမ္မတ, Omi ၏ပါမောက္ခချုပ်ပါမောက္ခချုပ်မှTekkeköyမြို့တော်ဝန် Hasan Tok အလည်အပတ်ခရီး ဒေါက်တာ Samsun တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ပါမောက္ခဒေါက်တာ Sait Bilgicler ဒေါက်တာ Mahmut Aydin သွားရောက်ခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာ Samsun အတွက်ဒုတိယတက္ကသိုလ်ဝန်ကြီးချုပ် Recep အဖြစ်ထူထောင် [ပို ... ]
CHP Nigde လက်ထောက်ဖြစ်သူ Omar Fathi Gürer, ထိုအစီအစဉ်မှယူဆောင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိမပြီးဆုံးသေးသောနှင့်နှောင့်နှေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများနှင့်အတူလုပ်ဖို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ Nigde ၏အစီအစဉ်နှင့်ဘတ်ဂျက်ကော်မရှင်ထဲမှာဖော်ပြထားပေမယ့်နှစ်ပေါင်းများစွာအစပျိုးလို့မရပါဘူး။7မှGürerဝန်ကြီး Cahit Turhan [ပို ... ]
Konya YHT ဘူတာနဲ့ End geliniyor ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရေးစင်တာ
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ İsa ApaydınKonya YHT ဘူတာနှင့်Kayacıkထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာလေ့လာတွေ့ရှိချက်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်။ သတင်းအချက်အလက်လယ်ပြင်လေ့လာမှုများ, YHT ဘူတာနှင့်ရထားလမ်း၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရေးစင်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောင့် Konya များအတွက်အရေးကြီးသောကြောင်းစိုးရိမ်ပူပန် Apaydin [ပို ... ]
တစ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရွာတူရကီ၏ပထမဦးဆုံးဥပမာ, Izmir Gulab ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရေးစင်တာစီမံကိန်း၏မိတ်ဆက်စကားဖြစ်ခြင်း, Spiller ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Cluster လုပ်ငန်းရှင်များ၏ကောင်စီကကျင်းပခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ Fevzi akai မှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုအတွက်İzmir Ege ကို Global ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအကောက်ခွန်ပွဲစားအစည်းအရုံး Inc ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု [ပို ... ]